युके, आयरल्यान्ड र जर्मनीसँगै बोइङ ७३७ म्याक्स आफ्नो आकाशमा प्रतिबन्ध लगाउने देश ११ पुग्यो, नेपालले के गर्छ? :: PahiloPost
युके, आयरल्यान्ड र जर्मनीसँगै बोइङ ७३७ म्याक्स आफ्नो आकाशमा प्रतिबन्ध लगाउने देश ११ पुग्यो, नेपालले के गर्छ?
12th March 2019, 09:30 pm | २८ फागुन २०७५
काठमाडौँ : पाँच महिना नहुँदै अमेरिकी कम्पनी बोइङको ७३७ म्याक्स ८ मोडलका दुई वटा विमान दुर्घटना भएपछि ११ वटा देशले आफ्नो आकाशमा यो मोडलको विमान उड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
पछिल्लो समय युके, जर्मनी, आयरल्यान्ड र सिंगापुरले यो विमान आफ्नो आकाशमा उड्न नपाउने गरी अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको हो।
एक नेपालीसहित १५७ जनाको मृत्यु हुने गरी इथियोपियन एयरलाइन्सको विमान इथियोपियामा दुर्घटना भएपछि प्रतिबन्धको यो लहर चलेको हो।पाँच महिनाअघि पनि यही मोडलको थाइ लायन एयरको नयाँ विमान दुर्घटना भएको थियो।
युकेको नियामक निकायले बोइङ ७३७ म्याक्सलाई उड्न, अवतरण गर्न र आफ्नो एयरस्पेसमा ट्रान्जिट गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ।
आयरल्यान्डले बोइङ ७३७ म्याक्सलाई आइरिस एयरस्पेसमा उड्न रोक लगाएको छ।
जर्मनीले पनि आफ्नो आकाशमा बोइङ ७३७ म्याक्स उड्न रोक लगाएको छ।
चीनको नागरिक उड्डयन प्रशासनले सोमबार सबै डोमेस्टिक उडानबाट यो मोडलका विमान उडाउन रोक लगाएको थियो। त्यसपछि९७ वटा यस्ता विमान उडाइरहेका ठूला तीन चिनियाँ एयरलाइन्सहरु चाइना एयरलाइन्स, चाइना इस्टर्न र चाइना सदर्नले सोमबारदेखि यो विमानको उडान बन्द गरे।
सिंगापुरको नागरिक उड्डयन विभागले सोमबार दिउँसो २ बजेदेखि आफ्नो एयरस्पेसमा यो मोडलको विमानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।
दक्षिण कोरियाली उड्डयन नियामक संस्थाले इस्टर जेटका दुई वटा यो मोडलका विमानको सञ्चालनमा रोक लगाएको छ।
मंगोलियाको नियामक संस्थाले मंगोलियन एयरलाइन्सका ७३७ म्याक्स मोडलका विमानको सञ्चालनमा रोक लगाएको छ।
मलेसियाको नियामक संस्थाले बोइङ ७३७ म्याक्स ८ का सबै विमान उड्न, अवतरण गर्न ट्रान्जिटमा रहन रोक लगाएको छ।
ओमानको नियामक संस्थाले बोइङ ७३७ म्याक्स ८ का सबै विमान उड्न, अवतरण गर्न ट्रान्जिटमा रहन रोक लगाएको छ।
नेपालको हवाई उडानको नियामक संस्था नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतम भन्छन्, ‘यो मोडलको जहाज कुनै पनि नेपाली वायु सेवा कम्पनीले सञ्चालनमा नल्याएको हुनाले यसबारे हामीले केही सोचेका छैनौँ।‘
युके, आयरल्यान्ड र जर्मनीसँगै बोइङ ७३७ म्याक्स आफ्नो आकाशमा प्रतिबन्ध लगाउने देश ११ पुग्यो, नेपालले के गर्छ? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।